Mareykanka oo cusbooneysiinaya gantaalaha Nuckliyeerka ugu aasan dalaka Yurub
Mogadishu - 02:24:48
Thursday March 26, 2020 - 21:12:01 in Wararka by Super Admin
Warbaahinta Jarmalka ayaa shaacisay in Bambooyin Nukliyeer ah oo uu Mareykanku waqti hore ku aastay meelo ka mid ah dalalka Qaaradda Yurub si uu isaga difaaco Ruushka waqti walba in haatan gantaalahaasi ay u muuqato in bartooda loo deyn doono, balse la cusbooneysiin doono.
Meelaha la rumeysan yahay in Bambooyinka Nukliyeerka Mareykanka ee dhulka hoostiisa uu ku aastay waxaa ka mid ah saldhig ciidammada Cirka ah oo uu ku leeyahay magaallada Buchel ee gobolka Rhineland-Palatinate oo ay maamulaan ciidamada Cirka Jarmalka.
Sawirro dhanka dayax gacmeedka ah ayaa lagu ogaaday in Bambooyinkani ay ku jiraan meelo ka hooseeya hangarro ku yaalla garoonka ciidammada cirka ee Buchel, waxaana halkaa la keenay dagaalkii qaboobaha.
Dadka deegaankaasi kuwooda ugu waayo aragsan ee siyaasadda ku jiray ayaa qaarkood markii ugu horreysay Bambooyinkan Nukliyeerka ah ee magaalladooda ku duugan waxay ka war heleen bartamihii sagaashameeyadii, taasoo ku noqotay mid yaab leh.
Qiyaas ahaan Bambooyinka Nukliyeerka Mareykanka ee ku keydsan meelo badan oo dalalka Yurub ka mid ah waxaa lagu qiyaasaa illaa 150 meelahaa, waxaase dowladda Jarmalka aysan weligeed arrintan uga hadal si toos ah, waloow ay sheegtay in uu jiray heshiis ay saxiixday oo ahaa Nukliyeer wadaag (Nuclear sharing agreement).
Waddammada kale ee heshiiskan Nukliyeer wadaagga saxiixay waxaa ka mid ah Talyaaniga, Belgium iyo Holland, waxaana dhammaan bambooyinkaasi nukliyeerka ay ku keydsan yihiin goobo aad loo ilaaliyo aysan dad bada ka war garaneynin.
2010-kii ayaa Baarlamanka Jarmalka wuxuu keenay Mooshin ay siyaasiyiintu ku dalbanayaan in Jarmalka oo ay xulafo yihiin Mareykanka uu u sheego in gantaallahaasi ka qaado Jarmalka, waxaana xigay in madaxweyne Obama uu isna ku baaqay adduun ka caaggan hubka halista ah ee Nukliyeerka.
Laakiin iyadoo 10 sano laga joogo mooshinkaasi waxaa weli muuqata in aan bambooyinkaasi nukliyeerka la qaadi doonin, balse taa beddelkeeda maadaama ay qadiimi yihiin la jadiidin doono, ka gadaal markii Ruushku uu 2014 weerar ku qaaday gacanka Crimea.
Waxaa jira cadaadis shucuubta dalalka galay heshiiskaasi Nukliyeerka ay dowladahooda ku cadaadinayaan in ay ka baxaan heshiiskii nukliyeer wadaagga.
Duuliye Jarmal ah oo kaxeeya diyaaradda Jarmalka ee Tornado oo wareysi siinayay DW ayaa sheegay in xitaa mas’uuliyiinta waaweyn ee Jarmalku aysan ka war qabin waxa ay Mareykanku ka sameynayaan garoonka ciidammada cirka ee Buchel, oo xitaa markii hal diyaarad oo Mareykan ah ay ku soo degeyso garoonkaasi gebi ahaantiisa la xiro, sidaa darteedna wuxuu duuliyahani sheegay inaysan jirin cid garan karta waxa diyaaraddaasi laga soo buuxiyay ma Coca-Cola mise Bambooyin halis ah.